Toerana malaza indrindra amin'ny fizahan-tany famindrana: Sina, India, Pakistan
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Toerana malaza indrindra amin'ny fizahan-tany famindrana: Sina, India, Pakistan
Araho ny vola. Marina izany ary izany no atahorana ho an'ny fizahan-tany famindrana. Ahiahy ny governemanta shinoa mbola nanangona taova avy amin'ny gadra sy vondrona vitsy an'isa.
Ao anatin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy any Shina, maro amin'ireo olona ao amin'ny vondrona vitsy an'isa no nohadihadiana biometrika, ka ny varotra iray manontolo dia ny olona nalaina ankeriny na nalaina an-keriny satria nifanaraka tamin'ny biometrika an'ny olona izay vonona hividy ilay taova. Ny kinova ofisialin'ny governemanta sinoa dia ny taova nomena ara-etika.
Betsaka ny olona any Aostralia no mitady taova mpamatsy vola any ampitan-dranomasina noho ny noheverina teo aloha, ary mampitandrina ny manam-pahaizana fa ny "fizahan-tany famindrana" dia mety hitohy ny fivarotana tsy ara-dalàna ny vatan'olombelona. Ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny Medical Journal of Australia dia nahitana ny isan'ny olona mandeha ampitan-dranomasina ho an'ny famindrana taova dia avo kokoa noho ny voarakitra ao amin'ny antontan'isa momba ny firaketana ireo mpanome taova.
Dokotera famindrana 200 no nanaovana fanadihadiana, maherin'ny roa ampahatelony no nisy marary nanangana ny fanantenana ny fanomezana any ivelany, ary mihoatra ny antsasany no nikarakara marary iray farafahakeliny izay tonga nitety tany ampitan-dranomasina mba hahazo famindrana.
Ny ankamaroan'ny olona izay nandeha nitety ampitan-dranomasina ho an'ireo fandidiana ireo dia nankany amin'ny famindrana voa satria matetika izy ireo ihany no marary afaka nandeha.
Ho an'ireo olona nitety tany ampitan-dranomasina ho an'ny fanomezana, ny toerana tena malaza dia ny:
Sina - 31 isan-jato
India - 16 isan-jato
Pakistan - 9 isan-jato
Ny 26 isan-jaton'ny olona izay nandeha nitety ampitan-dranomasina dia nanana fahasarotana - aretina ny otrikaretina sy bakteria no betsaka, "hoy izy.
Hitan'ny mpikaroka fa ny 93 isan-jaton'ny olona nandeha ampitan-dranomasina dia teraka tany ampitan-dranomasina. Ny fandinihana dia nahita ihany koa fa ny roa ampahatelon'ireo izay mandeha ampitan-dranomasina dia tena nandeha tany amin'ny firenena fahatelo mba hanaovana izany.
Any amin'ny firenena mahantra toa an'i Filipina, Moyen Orient, India, Pakistan, Bangladesh dia vao mainka mahantra ny olona. Mety homena dolara an-jato vitsivitsy ka hatramin'ny dolara vitsivitsy izy ireo, nefa avy eo dia amidy amin'ny $ 50,000, $ 100,000. Na dia afaka miaina amin'ny voa iray aza ny olombelona dia olana ny mividy azy ireo amin'ny vondrom-piarahamonina sahirana.
Manindrona ireo mpampiasa zava-mahadomelina, ny lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy, ny gadra ary ny mpivaro-tena dia matetika no lavina satria heverina fa atahorana kokoa tratran'ny viriosy VIH izy ireo.